1 USD သို့ NXT ᐈ ပွောငျး $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ တွင် Nxt
1 USD သို့ NXT
သငျသညျပြောင်းလဲပါပြီ 1 🇺🇸 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt. သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှုရလဒ်ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ. ငွေကြေးပြောင်း 1 USD သို့ NXT. ဘယ်လောက်လဲ $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt? — 102.6 NXT.ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြောင်းပြန်သင်တန်း NXT သို့ USD.ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် USD NXT သမိုင်းဆိုင်ရာဇယား, နှင့် USD NXT သမိုင်းဆိုင်ရာမှာ data ငွေလဲနှုန်းကို၏. ကြိုးစားကြဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပိုပြီးပြောင်း...
ပွောငျး 1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt
မှုနှုန်းခြင်းအားဖြင့်: 102.600 NXT (2.800)2.81%
ပြောင်းပြန်: $0.00975 USD
မင်းသိလား? တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ထိုနေ့၌, ငွေကြေးနှုန်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရန် Nxt ခဲ့: 26.560. ထိုအချိန်မှစ. ငွေလဲနှုန်းရှိပါတယ် တိုး 76.04 NXT (286.30%).
50 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt100 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt150 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt200 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt250 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt500 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt2000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt4000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt8000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Nxt49.44 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီး2500 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ယူရို5000000 ယူရို သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်500000000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ အီရန်ရီအော်လ်5000 အာရပ်ဒူဟမ်း သို့ ကာဇက်စတန် ထိန်ဂျီ1 အာရပ်ဒူဟမ်း သို့ ကာဇက်စတန် ထိန်ဂျီ8 Presearch သို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တာကာ27 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ1 ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ2200 ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို250000 ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ5000 ရုရှ ရူဘယ် သို့ အီရန်ရီအော်လ်500 အီရန်ရီအော်လ် သို့ ရုရှ ရူဘယ်
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 09 Apr 2020 09:30:03 +0000.